အဘိဓာန်များစုစည်းမှု(လိုချင်တာ လိုအပ်တာအကုန်သာယူ) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, March 11, 2017 PCDictionary No comments
( 1 .5MB ) စာမျက်နှာ - ၄၆၄
ဥပဒေနှင့်ပတ်သတ်သော စကားလုံးများကို လေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဥပဒေအဘိဓာန်ပါ။ ဦးကျော်ဇေယျ ရေးသားပြုစုထားပြီး စစ်သည်တော်စာပေမှ ထုတ်ဝေထားတာပါ။
ပါဠိ - မြန်မာ အဘိဓာန်
ဦးဆန်းလွင်(အရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ရေးသားပြုစုထားတဲ့2in 1 Travellers မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူအဆိုအရ မြန်မာစာ မြန်မာစကားလို လေ့လာလိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာလို့သာ ပြောရတယ်။ တကယ်ရေးသား ထားတာတွေက မြန်မာအသံထွက် အင်္ဂလိပ်စာ Burglish တွေနဲ့ပါ
( 14 . 50 MB ) စာမျက်နှာ - ၄၇၀
(ဒေါင်းလင့်ရှာတာမရလို့ နည်းပညာသမားကို အကူအညီတောင်းလိုပါတယ်ခဗျာ ဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခဗျ - စာအုပ်လင့်ပေါင်းစုံ )
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ စာလုံးဝေါဟာရ နှင့် ဘာသာစကားပြောစာအုပ်ကို Rev.C.Bennett က ပြုစုခဲ့သည်။ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းတွင် M.H.Eveleth က စိစစ်တည်ဖြတ်ပေးထားသည်။ ရန်ကုန်မှ ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ ၁၅၇ မျက်နှာပါရှိသည်
ယုသဒန်၏ အဘိဓာန်ကို အခြေပြုပြီး Robert Charles Stevenson (1851- 1905) နှင့် Frederick Howard Eveleth(1843-1932) တို့က စီစစ်တည်းဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးမြန်မာ၏ အကူအညီများ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။စာမျက်နှာ ၁၁၃၅ မျက်နှာရှိသည်။ တကယ်အသုံးဝင် လေ့လာစရာကောင်းမွန်တဲ့ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်
၂၈။မြန်မာ - ပြင်သစ်အဘိဓာန်(2004) မူရင်းနေရာ
( 800 KB ) စာမျက်နှာ - ၁၃၂
( 12 MB ) စာမျက်နှာ - ၃၄၆
(4MB ) စာမျက်နှာ - ၆၃၈
( 1 .8 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၅၅
( 27 MB ) -စာမျက်နှာ - ၁၁၀၃
( 11 .6MB ) စာမျက်နှာ - ၆၄၈
က - ဝဂ် အတွဲ ( ၆ )
စ - ဝဂ် အတွဲ ( ၇ )
စ - ဝဂ် အတွဲ ( ၈ )
တ - ဝဂ် အတွဲ ( ၉ )
တ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၀ )
တ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၁ )
တ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၂ )
ပ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၃ )
ပ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၄ )
ပ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၅ )
ပ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၆ )
အ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၇ )
အ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၈ )
အ - ဝဂ် အတွဲ ( ၁၉ )
အ - ဝဂ် အတွဲ ( ၂၀ )
အ - ဝဂ် အတွဲ ( ၂၁ )
ပါဠိ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
( 10 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၄၇
( 1 .3MB ) စာမျက်နှာ - ၄၃၈
( 25 .14 MB ) စာမျက်နှာ - ၇၂၂
Credit to မူလတန်းမှအထက်တန်းအထိအင်္ဂလိပ်စာ-ရွှေအိမ်စည်
Run laravel project locally
Increase and decrease brightness of screen in kali...
Kali linux 20162No sound | How to fix sound issu...
Burmese Font and Keyboard Installation for Ubuntu
၁၆ရက်နေ့ ၃လပိုင်း ၂၀၁၇ ချဲ၃လုံးဂဏန်း ၈၆၃ ထွက်သွား...
Samsung Galaxy Note3N9005 Lollipop V 5.0 Root
1 March 2017 Thai Lottery Number is 978 453 ( ၄၅၃ ...